Site na mmepe nke teknụzụ, ntopute nke Touch All na One Kiosk na-eme ka ndụ ndị mmadụ dịkwuo mma ma nwee ọgụgụ isi. Agbanyeghị, teknụzụ bụ mma agha nwere ihu abụọ. Site na ọnụ ọgụgụ nke ngwaahịa na-abawanye, ahịa ahụ na-amalite dị ka ọgba aghara, ngwaahịa na-ebuwanye ibu na-apụta, na-eme ka njikọ ahụ ghara ịdị n'otu.
Yabụ kedu ka ị ga - esi họrọ ngwaọrụ dị ọnụ ala?
Ihuenyo mmuta LCD
A na-eji LCD Touch ihuenyo eme ihe ugboro ugboro na igwe ahụ, yabụ na njimara ya dị oke mkpa. Pricegwọ nke Ngosipụta LCD nke ọma amaara ama dị ntakịrị karịa, mana nsonaazụ anya na tactile dị iche. Igwe ihuenyo nke LCD adịghị mma bụ n'ezie igwe anaghị arụ ọrụ nke ọma n'oge eji. Ọ bụghị naanị nke ahụ, mana ịdị mma nke ihuenyo mmetụ bụkwa isi ihe dị na ihuenyo ahụ. Ka ọ dị ugbu a, enwere mmetụ resistive, mmetụ capacitive na mmetụ infrared n'ahịa. Nke kachasị ewu ewu bụ mmetụaka aka mmadụ na-egbochi, mmetụ mmetụ aka dị elu, yana mmetụ capacitive dịkwa mma nke ukwuu. Ndị ọrụ kwesịrị ịhọrọ dịka ebumnuche ha na ihe ha chọrọ mgbe ha na-eme nhọrọ.
2. formancerụ Ọrụ Ngwaahịa
Na mgbakwunye na iji igwe dị mma, arụmọrụ ya na nrụpụta ngwaahịa dị ezigbo mkpa. Igwe a na-emetụ aka bụ ngwa ọrụ na-ejikọta kọmputa na ngosipụta, a na-ahazikwa ngwanrọ kwekọrọ iji gboo mkpa nke ndị ọrụ. Mgbe ahụ buru ụzọ lelee nchapụta, mkpebi na oge nzaghachi nke ngwaọrụ na nhazi nke ndị ọbịa mgbe ịzụrụ. Nke abuo, lelee ọrụ nke sọftụ ahụ iji hụ ma ọ ga-egboro anyị mkpa anyị.
3. Onye rụpụtara ya
Maka ndị ahịa, ịzụrụ abụghị naanị ngwaọrụ dị mfe, ịzụta bụ ọkachamara aka metụrụ aka na kiosk niile. Ya mere, na usoro a, anyị ga-enyochacha nke ọma nke ọrụ nke onye nrụpụta iji hụ na enweghị nsogbu ọ bụla na usoro ojiji n'ọdịnihu.
Na nchịkọta, jikọtara ya na akụkụ atọ nke isi ahụ iji tụnyere ha, anyị ga-azụrịrị akụrụngwa ngwaahịa dị ọnụ ahịa.